ပူမာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကူဂါ (Puma concolor)
ပူမာများ နေထိုင်ကျက်စားသည့် နယ်မြေဒေသ
ပူမာ (အင်္ဂလိပ်: Puma) သည် အမေရိကတိုက်များတွင် နေထိုင်ကျက်စားသော ကြောင်မျိုးရင်းဝင် သားရဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ အမေရိကတိုက်များ၏ ဒေသအသီးသီးမှ ပူမာ ကို "ကူဂါ၊ တောင်ခြင်္သေ့၊ တောင်ကြောင်၊ ပန်သာ သို့မဟုတ် ပိန့်သာ" ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းကြောင်ကြီးသည် ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်း၏ ကြီးမားသော တောရဲတိရစ္ဆာန်များအတွင်း အများဆုံးတွေ့နိုင်သော အမျိုးဖြစ်သည်။ ယုကွန်ပြည်နယ်၊ ကနေဒါမှ တောင်အမေရိကရှိ တောင်ဘက်အန်းဒီးစ်အတွင်း တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်းတွင်ရှိသော ကြောင်မျိုးစိတ်များအနက် ဂျဂွာ (ကျားသစ်မျိုးတစ်မျိုး)၏ အနောက် ဒုတိယအလေးဆုံး ကြောင်မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။ ကူဂါသည် ကြီးမားသော်လည်း သေးငယ်သောကြောင်မျိုးစိတ် များနှင့် ပိုမိုတူညီ၍ ခြင်္သေ့ထက် ကြောင်များနှင့် ပိုနီးစပ်သည်။
အဓိက အစာမျိုးများမှာ သမင်၊ဒရယ်၊မားလား၊ဆတ်၊သိုး၊ဆိတ်၊ဂျိုကောက်သိုး တို့နှင့် မြင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သေးငယ်သော အင်းစက်များနှင့် တောကောင်များ (ရှဉ့်၊ယုန် စသည်တို့)ကိုလည်း အမဲလိုက်သည်။ ဤကြောင်သည် ခြုံပုတ်များနှင့် ကျောက်တောင် ထူထပ်သောဒေသများတွင် ကျက်စားရသည်ကို နှစ်သက်သည်။ မြေပြန့်တွင်လည်း နေထိုင်နိုင်သည်။
↑ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "ကာနီဗိုရာ မျိုးစဉ်"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 544–545။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပူမာ&oldid=713306" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။